Mahay mikarakara « peau mixte »
Ireo « jus naturel » mahasolo fanafody!
Fotoana fahavokaran’ny voankazo eto amintsika amin’izao ary ahitana karazany maro mihitsy eny an-tsena eny.
LUDGER Mety ho lasa barea kely …araho ny tantarany
Zazalahy kely mpatory an-dalana eto an-drenivohitra i Ludger kely na i Dzé sy ny Reniny. Tsy manana trano izy mianaka ireo fa matory eny rehetra eny no sady tsy manana vilany fandrahoana sakafo ihany koa fa mahandro amin’ny kapoaka.
Ireo vehivavy, tanjaky ny BAREA
Ankavitsiana no nahafantatra ireo mpilalaon’ny Barea nialoha ny nandraisan’izy ireo anjara tamin’ny Lalao CAN 2019.
Hiara-hirona hitsena ny BAREA isika anio !
Nahatoky sy nino hatramin’ny farany na ireo mpilalao na ny Malagasy fa handrombaka ny amboara amin’ny fiadiana ny CAN 2019 ny Barea. Nifarana teo amin’ny ampahefa-dalana nefa ny dian’izy ireo tao anatin’ny fifaninanana, tamin’ny nandresen’ny Tonizia antsika tamin’ny isa 3 no 0 ka ireto farany no tafiakatra any amin’ny dingana manasa-dalana.
Suzanna : Naolana sy novonoin’ny vadiny saro-piaro
Niakatra fitsarana tamin’ity herinandro ity tao Alemana ny raim-pianakaviana iray izay voampanga ho nampijaly, nanolana ary namono am-badiny noho ny resaka hasarotam-piaro sy fanaovana tsindry hazolena.
Anosizato : Tratra ilay mpanolana bevohoka
Tratra ny iray tamin’ireo jiolahy telo nanendaka mpivady kely tratra alina handeha hody. Lasan’ireo jiolahy tamin’izany ny firavaka sy ny vola rehetra tany amin’izy mivady.
Adrien Melvin : Tiantsika ery!
Isan’ireo mpilalao baolina kitra malaza ao anatin’ny BAREA ihany koa i Melvin Adrien. Mpiandry harato izy ary saika hikoizan’ny tovovavy Malagasy ny hatsaran’ny endriny sy ny bikany.
Sokajin-koditra roa indray hita eo amina endrika iray no atao hoe : « peau mixte ». Araka izany, misy faritra maina sy makina no sady ahitana faritra mitera-menaka eo aminy.
Ahoana àry no hikoloana azy ? Inona ny “produits” ampiasaina ? tahaka ny ahoana ny « maquillage » mifanaraka aminy ? ….
Ny hamantarana azy
Rehefa « peau mixte » ny sokajin-koditra dia mora mitera-menaka sy mora tsemboka ny tarehy. Indraindray anefa, toa ara-dalàna tsy misy olana mihitsy. Isan’ny hamantarana azy koa ny “points noirs” matetika, satria misy faritra misy mason-koditra misokatra eo aminy. Araka izany dia tsy mifandanja ilay tarehy ka izay no mahasarotra ny fikarakarana azy. Na izany aza, tsy maharitra mandava-taona ireo olana ireo, fa mandalo ihany.
Rehefa eo anelanelan’ny 20 hatramin’ny 35 taona ny vehivavy no tena matetika manana an’ity sokajin-koditra ity. Tandremo fa mety ho avy amin’ny tsiry mpanentana mikorontana na avy amin’ny singa ety ivelany no mahatonga ny hoditrao ho lasa “mixte”. Isan’ny mitarika izany izao ny sigara, ny siramamy be loatra, ny sakafo voahodina ara-indostrialy, ny fanabeazana aizana toy ny pilina na ny “stérilets”, ny loto, ny rarin-tsaina… Toy izay koa ireo akora ampiasaina : “huiles”, “crème”, “lait”, “lotion”… raha tafahoatra na tsy hay ny nampiasa azy.
Alikaola sy sigara
Vakiana fotsiny eo amin’ny tarehy, tahaka ny fitenin’ny tanora, ny fomba fisakafo tsy mety, ny alikaola sy sigara, ny tsy fisotroana rano. Raha te hanana tarehy tsara hoditra dia ireo antony telo ireo no arahi-maso voalohany, mialohan’ny hampiasana akora. Azo leferina kokoa ny alikaola raha amin’ny antonony, fa ny sigara no tena fadiana, indrindra raha efa “peau mixte” ny sokajin-koditra. Miketraka avy hatrany ilay hodi-tava, mihamanify, miroraka, mikentrona… ao anatin’ny fotoana fohy. Eo amin’ny haingon-tava indray dia “maquillage” malefaka sady manome vokatra natoraly, tsy mirentirenty be, no mety amin’ity sokajin-koditra ity. Afaka manao “fond de teint” tsara ireo manana sokajin-koditra mifangaro, saingy tsy tsara loatra raha ampiana sy tsindriana matetika, mandrapaharivan’ny andro. Afaka manao “poudre” ihany koa, saingy tsy azo tsindriana hosotra maro sosona na atao matevina.
Ireo akora tian’ny « peau mixte » :
- “Gel moussant” ; “eau micellaire” na “eau démaquillant », hanadiovana tarehy
- « Crème légère » misy fangarona voankazo, na misy misy soratra hoe : « peaux à imperfections », ampiasaina amin’ny alina
- « Crème fluide matifiante », hanamandinana isa-maraina.